?Somaliya waa dal fashilmay oo ku guuldarraystay inuu helo dawlad hanaqaad ah? R/wasaaraha Britain David Cameron. – Radio Daljir
?Somaliya waa dal fashilmay oo ku guuldarraystay inuu helo dawlad hanaqaad ah? R/wasaaraha Britain David Cameron.
London, Nov, 15 – R/wasaaraha dalka Ingiriirka David Cameron ayaa dalka Soomaaliya ku tilmaamay mid ku fashilmay hanaan dawladnimo, waxaana uu tibaaxay in dalkaasi ay faraba?an ku hayaan burcad-badeed iyo kooxo xagjir ah xilli ay dalka ka jirto macaluul aad u daran.
Isagoo khudbad ka jeediyey magaalada Locdon ayaa Mr. Cameron waxa uu sheegay in burcad-badeedda Soomaalidu ay khatar weyn ku tahay maraakiibta ganacsiga ee dalkiisa iyo guud ahaamba kuwa caalamka, ayna dunida hortaallo xujo ah sidii ay arrintan tallaabo wax ku ool ah uga qaadan lahaayeen.
Waxaa uu intaasi ku daray in dalkiisu uu sanadka soo socda martigalinayo shir ballaaran oo ku saabsan arrimaha Soomaliya, si gaar ahna diiradda loogu saarayo arrimaha burcad-badeedda iyo wax uu ku tilmaamay xagjirka fogaaday oo loo arkay inuu ula jeedo ururka Al-shabaab.
Horay ayuu R/wasaare Cameron u sheegay inuu maraakiibtiisa ganacsiga u fasaxay inay qaadan karaan ilaalo hubeysan oo ka difaacda burcad-badeeda Soomaalida oo weerarro taxane ah ku qaada maraakiibta ganacsiga ee maraya gacanka cadmeed iyo badweynta India.
Waxa uu si weyn uga hadlay afduubyada loo geysanayo shaqaalaha gargaarka, dalxiisayaasha Kenya iyo dhallinyaro Somali Ingiriis ah oo uu sheegay inay ku biirayaan kooxaha mintidka ah ee ka dagaalamaya Somaliya. Si arrimahaasi wax looga qabtana waa in gacan la siiyaa dalalka gobolka ayuu yiri David Cameron.